Maraykanka oo shaaciyey qoraallo ku xidhiidhinaya Sucuudiga weerarradii 9/11 - Bulsho News
Mullah Cumar oo sanado ku dhuumanayay meel u dhow saldhig...
FBI-da Maraykanka ayaa shaacisay in aanay hadda ka dib ahayn sir in la qarinayo qoraalo muujinaya xidhiidhkii ay ku lahaayeen muwaadiniin Sucuudi ah oo ku noolaa Maraykanka iyo laba ka mid ah dadkii weerarka qaaday 9/11.
Ehalada dadkii ku le’day weerarkaas ayaa mudo dheer xukuumadda ku tirtirsiyayey in la shaaciyo qoraaladaas, waxaanay ku doodayeen in saraakiil Sucuudi ahi ay ka warqabeen in weerarkaa la maleegayo hase yeeshee aanay waxba ka qaban sidii looga hortagi lahaa.
Hase yeeshee, dukumentiyadaas ayaanay ku jirin wax caddayn ah oo muujina in xukuumadda Sucuudigu wax xidhiidh ah la lahayd weerarkaa 9/11.
Shan iyo toban ka mid ah 19-kii afduubay diyaaradaha ayaa ahaa muwaadiniin Sucuudi ah.
Ka hor intii aan qoraaladaa laga saarin xeerka sir ahaanshaha ayaa safaaradda Sucuudiga ee Washington soo dhawaysay in la shaaciyo qoraaladaas waxaanay mar kale beenisay in wax xidhiidh ahi ka dhaxeeyey boqortooyada iyo afduubayaasha, waxaanay ku tilmaantay eedaha noocaas ah “been iyo sumcad dilid”.
Qoraaladan waxa la shaaciyey labaatan guuradii ka soo wareegtay weerarradii argaxixiso ee ugu ba’anaa ee ka dhaca dhulka Maraykanka oo qiyaastii 3000 oo qof ku dhinteen markii afar diyaaradood la afduubay, waana kuwii ugu horeeyey qoraaladani kuwo kale oo la filayo in la shaaciyo iyagana.
Qoraaladan ay haatan faafiysay FBI oo 16 bog ah ayaa aad loo tifaftiray oo meelaha qaarkood la masaxay. Waxa qoraalkani ku salaysan yahay waraysiyo lala yeeshay dad magacyadooda la qariyey, waxanay tilmaamayaan dad door ah oo u dhashay Sucuudiga iyo laba ka mid ah afduubeyaasha Nawaf Al-Xasmi iyo Khalid Al-Mindar.
Qayb ka mid ah qoraallada la shaaciyey
Afduubeyaasha ayaa iska dhigay in ay arday yihiin oo sidaa ku galay Maraykanka sannadkii 2000. Qoraalada FBI waxay tilmaamayaan in markaa ka dib ay dadkaasi taakulo mug leh oo tas-hiilaadka ah ka heleen nin la yidhaa Cumar Al-Bayuumi oo ay maragyadu sheegeen in uu had iyo goor tegi jiray qunsuliyada Sucuudiga ee Los Angeles in kasta oo markaa sharciga uu dalka ku joogay ahaa ardaynimo.
Bayuumi ayaa maragyada FBI sheegeen in uu “maqaam sare ku lahaa” qunsuliyada. “Bayuumi taageeradii uu siiyey Xasim iyo Midar waxa ka mid ahayd inuu turjubaan u ahaa, u qorsheeyey safarkooga iyo lacag ba” ayaa qoraalkaas ku taal.
Qoraalka FBI waxa kale uu sheegayaa inuu jiray xidhiidh ay lahaayeen laba ka mid ah afduubeyaasha iyo Fahad Al-Sumayri oo ahaa imaam muxaafid ah oo imaam ka haa masaajidka King Fahad Mosque ee ku yaal Los Angeles. Waxa lagu timaayay inuu ahaa ubucda “aragtida xagjirka ah ee ay qabeen”.
Bayuumi iyo Sumayri labaduba waxay Maraykanka ka dhoofeen todobaadyo uun ka hor weerarradii 9/11, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AP.
Wakaaladu waxay soo xigatay Jim Kreindler, oo ah qareen u dooday ehelada dadkii ku waxyeeloobay 9/11 oo sheegay in qoraaladaa la shaaciyey “ay marag u yihiin doodii aanu qabnay ee ahayd in xukuumadda Sucuudigu masuuliyad ku lahayd weerarkii 9/11”.
Bishii hore ayaa dacwad ay gudbiyeen eheladaasi waxay ku doonayeen in dhawr sarkaal oo sarsare oo Sucuudi ah iyaga oo la dhaariyey su’aalo la weydiiyo.
Maamulladii George W Bush, Barack Obama iyo Donald Trump ayaa dhamaantood diiday in ay shaaciyaan qoraaladaa iyaga oo ku sababaynay arimo nabadgelyo awgood.
Laakiin Joe Biden ayaa todobaadkii hore amar ku bixiyey in dib loo eego dukumentiyadii baadhitaanka dhacdadaas, waxaanu saraakiisha u sheegay in ay shaaciyaan wixii la shaacin karo mudada lixda bilood ah ee soo socota gudaheeda.
Waxa mudaba socday hadal hayn ah in sarkaal Sucuudi ahi ku lug lahaa weerarkaa, marka la eego tirada muwaadiniinta Sucuudiga ah ee ka qayb qaatay weerarradaas iyo in hogaamiyihii Al-Qaacida ee Usaama Bin Laadin ahaa Sucuudi.
Hase ahaatee, warbixinta gudidii baadhitaanka 9/11 kuma jirto wax caddayn ah oo xukuumadda Sucuudiga ama saraakiil sarsare oo ka tirsan ah la xidhiidhinaysa dhacdadaas.
Maraykanka iyo Sucuudigu waxay ahaayeen xulufo mudo dheer in kasta oo xidhiidhkoodu mararka qaar yara adkaa.
Donald Trump ayaa sii xoojiyey xidhiidhkaa laakiin Joe Biden wuxuu Sucuudiga ku tilmaamay dal “faquuqan” marka la eego dilkii foosha xumaa ee lagu khaarijiyey suxufigii Sucuudiga ahaa ee Jamaal Khaashoqji ee lagu dilay Turkiga.
Frank Gardner oo ka tirsan BBC ayaa sheegay in Biden wixii intaa ka dambaysay debciyey mawqifkiisii ku aadanaa ninka ugu awoodda badan Sucuudiga ee ah dhaxal sugaha Maxamed Bin Salman, taasina ay ka dhalatay xaqiiqada ma dhaafaanka ah ee ah muhiimadda is xulufaysigoodu leedahay.